Amazwe aseMpuma Afrika Amkela iSithili se-COVID-19 yesiCwangciso sokuBuyisa uKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Amazwe aseMpuma Afrika Amkela iSithili se-COVID-19 yesiCwangciso sokuBuyisa uKhenketho
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Abaphathiswa bommandla weMpuma Afrika babehlangene phantse phantsi kwesikhundla sokuba ngusihlalo waseKenya kwezoKhenketho kunye neZilwanyana zasendle, uNajib Balala kwaye bonke bavuma ukuthatha amanyathelo okubuyisela.
Abaphathiswa bavumile ukuba basebenzise iindlela ezihlangeneyo nezilungelelanisiweyo ezijolise ekubuyiseleni ukhenketho
Isicwangciso sifuna ukwenziwa kweephakeji zovuselelo ezijolise ekutshiseni icandelo kwakhona.
Isicwangciso sifuna inkxaso yotyalo-mali kwezokhenketho kwingingqi kubandakanya amashishini amancinci nasakhasayo.
Ukuseta ukubuyisela kwimeko yesiqhelo ye-COVID-19 kukhenketho kunye nolondolozo lwasendle, i Imimandla yengingqi yeMpuma Afrika bayile kwaye bamkela isiCwangciso sokuBuyisa uKhenketho seNgingqi se-COVID-19 esijolise ekuvuseleleni icandelo lokhenketho nelokhenketho elihlaselwe kakubi ngubhubhane wehlabathi.
Phakathi kwamanyathelo anjalo kukwenziwa kweephakeji zovuselelo ezijolise ekuvuseleleni icandelo lokhenketho kunye nokhenketho kunye nokuxhasa utyalomali lokhenketho kulo mmandla, kubandakanya amashishini amancinci kunye namashishini amancinci.
Abaphathiswa bavumile ukuba basebenzise iindlela ezihlangeneyo nezilungelelanisiweyo ezijolise ekubuyiseleni ukhenketho okubandakanya ungenelelo olujolise ekuqiniseni amanyathelo aphuhliswayo aphunyezwa kumanqanaba esizwe.
Baye bajonga kwaye bavuma uyilo olusisikhokelo sommandla sokuqalisa kwakhona kweenkonzo kwicandelo lezokhenketho nakumaziko okhenketho.
Ngelixa besamkela isikhokelo, abaphathiswa bavumile ukuba kukho imfuneko yoko I-EAC izikhokelo ezihambelanayo zokuqalisa kwakhona kweenkonzo zokhenketho kunye nokwamkela iindwendwe kwingingqi.
Abaphathiswa baqaphele ukuba izikhokelo zommandla ziya kunceda ekuqinisekiseni ukulungelelana ekuqalisweni kwakhona kweenkonzo zokhenketho kunye nokunceda ekwakheni ukuthembana nokuzithemba kubakhenkethi bamanye amazwe abatyelele le ngingqi.
Phakathi kwemikhombandlela yeqhinga kunye nezenzo ezihambelanayo neQhinga loRhwebo loKhenketho loLuntu lwaseMpuma Afrika kukuphuhliswa kwemveliso yokhenketho yommandla nakwamanye amazwe.
Eminye imikhombandlela kukuthengisa kweMpuma Afrika njengendawo ehamba phambili kwezokhenketho kwingingqi e-Afrika, ibeka iMpuma Afrika njengendawo ehamba phambili kwezokhenketho, kunye nokomeleza umgaqo-nkqubo wezentengiso kunye nesakhelo samaziko nokuphucula intengiso yezokhenketho yengingqi ye-Afrika kunye nenkxaso mali.